1 Ahene 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ahene 18:1-46
18 Na nna pii akyi+ no, Yehowa asɛm baa Elia nkyɛn wɔ afe a ɛto so abiɛsa no mu sɛ: “Kɔ, na fa wo ho kɔkyerɛ Ahab, efisɛ merebɛma osu atɔ agu asase no so.”+ 2 Enti Elia kɔe sɛ ɔde ne ho rekɔkyerɛ Ahab bere a na ɔkɔm no mu ayɛ den+ wɔ Samaria no. 3 Saa bere no ara mu na Ahab frɛɛ Obadia a ɔyɛ ne fiepanyin+ no. (Ná Obadia yɛ obi a osuro+ Yehowa yiye. 4 Enti bere a Yesebel+ kunkum Yehowa adiyifo+ no, Obadia faa adiyifo no mu ɔha de wɔn kohintaw ɔbodan mu, aduonum aduonum, na ɔmaa wɔn aduan ne nsu.)+ 5 Ahab ka kyerɛɛ Obadia sɛ: “Kɔhwehwɛ asase no so nsuti ne nsubon nyinaa ho. Ebia yebenya sare momono,+ na ama yɛatumi akora apɔnkɔ ne mfurumpɔnkɔ no nkwa so na mmoa no ansan anwuwu bio.”+ 6 Enti wɔkyɛɛ asase no mu ma obiara faa ne kwan. Ahab de n’ani kyerɛɛ baabi, na Obadia nso de n’ani kyerɛɛ baabi foforo.+ 7 Bere a Obadia nam kwan so rekɔ no, ɔbɛhwɛ a Elia na ɔreba abehyia+ no yi. Ɛhɔ ara na ohui sɛ ɛyɛ ɔno, na ɔde n’anim butuw fam+ kae sɛ: “Me wura+ Elia ni anaa?” 8 Ɛnna obuae sɛ: “Ɛyɛ me. Kɔka kyerɛ wo wura+ sɛ, ‘Mahu Elia.’” 9 Nanso obuae sɛ: “Bɔne+ bɛn na mayɛ a enti wopɛ sɛ wode w’akoa hyɛ Ahab nsa ma okum me? 10 Sɛ́ Yehowa wo Nyankopɔn te ase yi,+ ɔman anaa ahenni biara nni hɔ a me wura nsoma nkɔhwehwɛɛ wo wɔ hɔ. Sɛ wɔka sɛ, ‘Onni ha’ a, ɔma ahenni anaa ɔman no ka ntam de kyerɛ sɛ wonhuu wo.+ 11 Nanso wuse: ‘Kɔka kyerɛ wo wura sɛ, “Mahu Elia.”’ 12 Sɛ mifi w’anim kɔ a, nea ɛbɛba ne sɛ, Yehowa honhom+ bɛfa wo akɔ baabi a minnim; nanso sɛ mekɔbɔ Ahab amanneɛ na wanhu wo a, okum na obekum+ me; w’akoa de, efi me mmofraase na masuro Yehowa.+ 13 Wɔnkaa nea meyɛe nkyerɛɛ me wura bere a Yesebel kunkum Yehowa adiyifo no anaa? Mede Yehowa adiyifo no mu ɔha kohintaw ɔbodan mu, aduonum aduonum,+ na memaa wɔn aduan ne nsu daa.+ 14 Nanso wuse, ‘Kɔka kyerɛ wo wura sɛ, “Mahu Elia.”’ Okum na obekum me.”+ 15 Ɛnna Elia kae sɛ: “Sɛ́ asafo Yehowa+ a migyina n’anim no te ase yi,+ ɛnnɛ meyi me ho adi akyerɛ no.” 16 Ɛnna Obadia kohyiaa Ahab ka kyerɛɛ no; na Ahab nso kohyiaa Elia. 17 Ɛbae sɛ bere a Ahab huu Elia pɛ, Ahab ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo a wode mmusu aba Israel so, wuni?”+ 18 Ɛnna obuae sɛ: “Ɛnyɛ me na mede mmusu+ aba Israel so, ɛyɛ wo ne wo papa fiefo,+ efisɛ moagyaw Yehowa mmara nsɛm+ akodi Baal anyame akyi.+ 19 Na afei soma ma wɔnkɔboaboa Israel nyinaa ano mmehyia me wɔ Bepɔw Karmel+ so, wɔne Baal adiyifo+ ahanan aduonum ne abosonnua+ ho adiyifo ahanan a wodidi Yesebel+ pon so no.” 20 Enti Ahab soma kɔɔ Israelfo nyinaa mu na wɔkɔboaboaa adiyifo+ no ano baa Bepɔw Karmel so. 21 Ɛnna Elia twiw baa ɔman no nyinaa nkyɛn bɛkae sɛ: “Da bɛn na mubehinhim nsɛm abien ntam akosi?+ Sɛ Yehowa ne nokware Nyankopɔn a, munni n’akyi,+ na sɛ Baal nso a, munni n’akyi.” Na ɔman no amma no mmuae biara. 22 Na Elia toaa so ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Mene Yehowa diyifo a waka,+ me nkutoo na maka, nanso Baal adiyifo yɛ ahanan aduonum. 23 Na afei momma wɔmma yɛn anantwinini nkumaa abien, na momma wɔmfa nantwi kumaa biako na wontwitwa mu asinasin ngu nnyina so, nanso wɔmmfa ogya nnto mu. Me nso mesiesie nantwi kumaa a aka no de agu nnyina so, nanso meremfa ogya nto mu. 24 Na mommɔ mo nyame din mfrɛ no,+ na me nso mɛbɔ Yehowa din afrɛ no; Onyame a ɔde ogya+ begye so no, ɔno ne nokware Nyankopɔn.”+ Ɛnna ɔman no nyinaa buae sɛ: “Ɛyɛ asɛmpa.” 25 Afei Elia ka kyerɛɛ Baal adiyifo no sɛ: “Mompaw nantwinini kumaa biako mfa, na munni kan nsiesie, efisɛ mo na modɔɔso; mommɔ mo nyame din mfrɛ no, na mmom mommfa ogya nnto mu.” 26 Ɛnna wɔfaa nantwinini a ɔde maa wɔn no. Afei wosiesiei, na wɔbɔɔ Baal din frɛɛ no fi anɔpa kosii owigyinae sɛ: “O Baal, gye yɛn so!” Nanso wɔante nne+ bi, na obi nso annye so.+ Saa bere no nyinaa na wɔrehuruhuruw twa afɔremuka a wɔasi no ho hyia. 27 Eduu owigyinae no, Elia fii ase dii wɔn ho fɛw+ sɛ: “Monteɛteɛm denneennen, na ɔyɛ onyame;+ ebia na ɔredwen asɛm bi ho, anaa ebia ɔkɔ baabi so+ rekogya n’anan.+ Ebia na wada, na ɛsɛ sɛ onyan!”+ 28 Na wɔde nne kɛse teɛteɛɛm, na sɛnea wɔn amanne te no, wɔde asekan twitwaa wɔn ho+ de mpeaw wowɔɔ wɔn ho kosii sɛ mogya guu wɔn. 29 Na ɛbae sɛ owigyinae twaam no, wɔtoaa so yeyɛe sɛ adiyifo+ kosii aduan afɔre bere, nanso wɔante nne bi, obiara annye so, na wɔante obiara nka.+ 30 Afei Elia ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ: “Muntwiw mmɛn me.” Na ɔman no nyinaa twiw bɛn no. Ɛnna osiesiee Yehowa afɔremuka a wɔabubu+ no no. 31 Enti Elia tasee abo dumien sɛnea Yakob mma mmusuakuw dodow te; ɔno na Yehowa ka kyerɛɛ no+ sɛ: “Wɔbɛfrɛ wo Israel.”+ 32 Na ɔde abo no sii afɔremuka+ Yehowa din+ mu, na otwaa ɔkã a ne kɛse te sɛ asase a wobetumi agu aba susukora abien wɔ so wɔ afɔremuka no ho nyinaa hyiae. 33 Ɛno akyi no, ɔhyehyɛɛ nnyina+ no wɔ so, na otwitwaa nantwinini no mu asinasin de guu nnyina no so. Afei ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa nsu nhyehyɛ nhina akɛse anan amaama, na munhwie ngu ɔhyew afɔre ne nnyina no so.” 34 Ɛnna ɔkae sɛ: “Monsan nyɛ bio.” Na wɔsan yɛe bio. Na ɔsan kae sɛ: “Monyɛ no ne mprɛnsa so.” Na wɔyɛɛ no ne mprɛnsa so. 35 Enti nsu no fofaa afɔremuka no ho nyinaa hyiae, na ɔkã no nso, ɔde nsu hyɛɛ no mã. 36 Bere a aduan afɔre bere+ dui no, Elia twiw bɛn afɔremuka no, na ɔkae sɛ: “O Yehowa, Abraham+ ne Isak+ ne Israel+ Nyankopɔn, ɛnnɛ ma wonhu sɛ wone Onyankopɔn wɔ Israel,+ na me nso meyɛ w’akoa, na w’asɛm+ so na menam ayɛ eyinom nyinaa. 37 Gye me so, O Yehowa, gye me so, na ɔman yi nhu sɛ wo Yehowa,+ wone nokware Nyankopɔn no, na wo na woasan adan wɔn koma aba.”+ 38 Ɛnna Yehowa gya+ tɔ fi soro bae, na ɛbɛhyew ɔhyew+ afɔre no ne nnyina no ne abo ne dɔte no, na ɛyow nsu a ɛwɔ ɔkã no mu nyinaa.+ 39 Bere a ɔman no nyinaa hui no, ntɛm ara na wɔde wɔn anim butubutuw fam+ kae sɛ: “Yehowa ne nokware Nyankopɔn! Yehowa ne nokware Nyankopɔn!” 40 Ɛnna Elia ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkyere Baal adiyifo no! Mommma wɔn mu biako mpo mmfi mo nsa!” Ɛhɔ ara na wɔkyeree wɔn, na Elia de wɔn sian kɔɔ Kison subon+ no ho kokunkum wɔn wɔ hɔ.+ 41 Afei Elia ka kyerɛɛ Ahab sɛ: “Kɔ na kodidi na nom+ efisɛ mate osu kɛse nka.”+ 42 Na Ahab kodidi nomee. Elia de, ɔforo kɔɔ Karmel atifi de n’anim kobutuw fam+ na ɔde ne ti hyɛɛ ne nkotodwe ntam.+ 43 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Mesrɛ wo, foro kɔhwɛ po fam.” Enti ɔkɔhwɛe, na ɔkae sɛ: “Manhu hwee.” Na ɔkaa no mpɛn ason kyerɛɛ no sɛ, “San kɔ.”+ 44 Ɛbae sɛ bere a ɔkɔɔ nea ɛto so ason no, ɔbɛkae sɛ: “Hwɛ! mihuu omununkum ketewa bi a ne kɛse te sɛ onipa nsam sɛ efi po mu reforo kɔ soro.”+ Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Foro kɔka kyerɛ Ahab sɛ, ‘Siesie wo teaseɛnam+ na sian kɔ, na osu anka wo anhyɛ ha!’” 45 Na omununkum maa wim yɛɛ tumm, na mframa bɔe+ na osu kɛse fii ase tɔe.+ Na Ahab de ne teaseɛnam no ani kyerɛɛ Yesreel.+ 46 Ná Yehowa nsa wɔ Elia so,+ enti ɔkyekyeree n’asen+ tuu mmirika kosian Ahab ho koduu Yesreel.+
1 Ahene 18